Ituu keessatti — Ruuboo jedhamu. Guddinaan odeeffannoon argaman oduu afaaniin kan daddabraniidha.
Malaak Saggad ykn Sarta Dingil kan jedhamu itti dabree aangoo Habashaa qabatee lola ittifufe. Ibiddi hangafaafi quxxusutti adda bahee walkabjuuniifi waliif abboomamuun buluun dhalate.
Kanaaf Oromoon osoo sirna Gadaatiin as hin bahin, sirna qoodama karra cimdii kanaan walbulchaa ture jechuun nidandeenya.
Abbaa Baahireenuu yeroo akkaataa godaansa Oromoo barreeyse: Sadarkaan Gadaa maqaa gurmuu waggaa dhaloota ilmaan kormaati jechuudha. Hambisaaniis lafaa haaraya osoo hinqabatin Minas wajjiin lola mitaaba osoo godhuu Gadaan isaa dhumeeRoobaleetti dabarse. Akkaataan qoodamaa kuniis, seera umamaa kan hordofu qaba.
Raaboma waggaa 33 — 40 6. Marsaan Gadaafi Goggeessi Gadaa akkanatti hiriyyummaa murteessu. Sadarkaaleen Gadaa ilmaan kormaa keessa dabran bakka gariitti amala addaa yoo qabaatanillee waliigalatti akka armaa gadiitti keenya.
Marsaan Gadaa tokkoo waggaa 40 qabaata. Dhugaan kunimmoo abbaa biyyummaa Oromoo kan ibsudha.
Remember me on this computer. Ilmaan jaarsaa warra waliin dhalatan hundaan hiriyyaa tahuu dandayu, jechuun ilmaan kormaa wajjiinillee hiriyyaa walii tahuu dandayu. Waggaan saddeettan Gadaa tokko maqaa mataa isaa qabaata. Gujii keessatti — Doorii jedhamu.
Boorana, Gujiifi Arsii keessatti ammoo, isa jahaffaadha. Ilmaan kormaa sadrakaa Dabballoomaa fixan Gaammotti dabru. Yeroo kana keessatti dhimma biyya, bulchiinsa, sera, aadaa, amantiifi seena dabre baratu.
Ummatni kamiyyuu ni sossoha, bakka takka gadhiisee bakka biraatti ni godaana. Dalagaa kanaafi kana fakkaatanitti haa bobbahan malee, sadarkaa kanatti tohannoo warraa ala hin bahan. Kuniis waan mootii hinqabneef namni isaan ajaju hinjiru.
Sadarkaa Ormooo tokko waggaa saddeet qaba.